“လိုအပ် တောင့်တ ……..မျှော်လင့်…….ကြောင့်ကျ”(အဆုံးပိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » “လိုအပ် တောင့်တ ……..မျှော်လင့်…….ကြောင့်ကျ”(အဆုံးပိုင်း)
“လိုအပ် တောင့်တ ……..မျှော်လင့်…….ကြောင့်ကျ”(အဆုံးပိုင်း)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 8, 2011 in Drama, Essays.. | 10 comments
ကျနော်တို့ မိုးကုတ်ရောက်တဲ့ည ကျတော့ ညနေစာ ထမင်းစားထွက်ရင်းတည်းခိုးခန်းနားလေးမှာရှိတဲ့ညဈေးလေးကို လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။
အဲတော့လဲ ရန်ကုန်သွားတုန်းကလို့ မနက်စောစော အင်တာနက်ဆိုင် ထိုင်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့။
နောက် ပူရီ တိုရှည် ချပါတီရတယ်လို့ စာရေးထားတဲ့ အိန္ဒိယ စားသောက်ဆိုင်လေးကိုတွေ့တော့ မနက်လာစားမယ်ဆိုပြီး
မနက် ခြောက်နာရီလောက် အိပ်ယာထ လမ်းလျှောက် 7နာရီထိုးခါနီးလောက် ညကတွေ့တဲ့ဆိုင်လေးကို
အဲဒါနဲ့ဘဲ လမ်းဒေါင့်နားက ရတနာကောင်းကင်စာပေနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာဘဲ
မနက်စောစော ကားဟွန်းသံမရှိ ၊
မြို့လေးက ပကတိ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။
လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အနည်းငယ်သောလူတွေကလဲ အေးအေးဆေးဆေး။
ခရီးသည်စောင့်နေရှာတဲ့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီတွေကလဲ “ဘယ်သွားမလဲ”လို့မေးတာကလွဲရင်အေးဆေး၊
ပြာလောင်ခတ်သူမရှိ ပူပန်ကြောင့်ကြသူမရှိ အချိန်မမှီမှာစိုးသူမရှိ။
ကျနော်နေ့စဉ်ကျင်လည်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မန္တလေးနဲ့ဆိုရင် တခြားစီပါဘဲ။
မန်းလေးမှာဆိုရင် မနက်5း15 အိပ်ယာထ။
ဒီ အချိန်ဆိုရင်ကို တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းမြည်သံတွေက ကျနော့်ကို စတင်လို့မောင်းနှင်ပါပြီ။
7း15 ရေချိုး ပြီးရင်ဆိုင်ကယ်ထုတ် လမ်းမပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပူလောင်ခြင်းတွေနဲ့မနက်ခင်းကိုစဖွင့်ရပါတော့တယ်။
လီဗာကိုအသားကုန်နင်းလို့ တဗြဲဗြဲနဲ့အသံတွေပေးနေတဲ့ ခရီးသည်တင်ကားတွေကို သေမှာကြောက်တော့ဖယ်ပေး၊
ကိုယ်ကလဲ လမ်းမပေါ်တက်နင်းချင်တဲ့ စက်ဘီးသမားကို ဟွန်းတတီတီပေးလို့မောင်းချ၊
လမ်းလျှောက်စရာ လူသွားစင်္ကြန်မရှိလို့ လမ်းပေါ်တက်လျှောက်တဲ့ခြေလျင်သမားကို စက်ဘီးသမားက
ကလင် ကလင်အသံပေးလို့ ဘေးဖယ်ခိုင်း။
ကျနော်ရန်ကုန်ကိုခဏရောက်တဲ့အချိန် မှာတော့ မန်းလေးမှာလူများတယ်ရူပ်ယှက်ခတ်တယ်ဆိုတာ
ရန်ကုန်နဲ့ယှဉ်လိုက်တော့ မန်းလေးစည်တယ်ဆိုတာ တောဘုရားပွဲသာသာ။
ပန်းသယ်တွေ ဂျာနယ်သယ်လေးတွေရဲ့မျက်နှာမှာလဲ မျှော်လင့်ခြင်းတွေအပြည့်၊
မမြင်နိုင်သောအင်အားကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုက မြို့မှာနေတဲ့ သက်ရှိသက်မဲ အားလုံးကို
@@@@@& @@@@@& @@@@@& @@@@@& @@@@@&
နေ့လည်ပိုင်းအလုပ်အားတဲ့အခါမှာတော့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထဲကိုရောက်နေတဲ့မေးလ်တွေဖတ် ကိုယ်ကလဲပို့စရာရှိတာကို ပို့ဘို့ပေါ့။
ထူးခြားတာက စက်အားလုံးကလက်တော့လေးတွေကို သီးသန့်မောက်စ်နဲ့ကီးဘုတ်တွဲချိတ်ပေးထားတာပါ။
ပုံလေးတွေတင်လိုက်တာနဲ့ ခဏလေးနဲ့တက်သွားတော့ အတော်လေးကို စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ကျနော်မန်းလေးမှာလဲကြုံတဲ့နေရာမှာ ကြုံသလိုဆိုင်ပေါက်စေ့ဝင်လို့ အင်တာနက်သုံးတတ်ပါတယ်၊
Vz0 ကနေချက်လို့ကြူနေသူတွေ တွေ့ရသလို အဝေးမှာအလုပ်သွားလုပ်နေသူတွေကို မိသားစုလိုက်ကြီး
တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ကြီးချက်တင်ကနေ ဟိုဘက်ကတစ်ယောက်ထဲကိုဝိုင်းကျပ်လို့
ကျနော်ရန်ကုန်မှာခဏရောက်နေတုန်းက မနက်လမ်းလျှောက်ရင်းအင်တာနက်ဆိုင်ကို ၀င်ထိုင်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီဆိုင်လေးမှာ မနက်စောစောဆိုရင် နိုင်ငံခြားကို ဖုန်းလာဆက်သူတွေများပါတယ်။
ရန်ကုန်နေတဲ့တစ်ပါတ်လုံးလုံး အဲဒီဆိုင်လေးမှာ ကျနော်နေ့တိုင်းလောက်ရောက်တော့
“သားပို့ပေးလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံက 123ဇာတ်မျောထဲမှာပါသွားလို့သားကိုဖျောင့်ဖြပြီး အယူခံဝင်နေတဲ့အဖေ”
“အဝေးရောက်နေတဲ့သမီးလေးကို အန္တရာယ်ကင်းစေဘို့ တရားစာတွေလာရွတ်ပြနေတဲ့မေမေ”
“မောင့်ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်း လူများကြားမှာကိုတောင် မရှက်မကြောက်နိုင်ဘဲ ချစ်ခွန်းဖွဲ့သီလုပ်နေတဲ့ ညကလေး”
မင်းအမေလက်ထဲအပ်တော့ မမက လက်ဝေခံဖြစ်နေလို့ လာငိုပြနေတဲ့ မောင်လေးရဲ့မမ ”
“အဝေးရောက်နေတဲ့အဖေ ပို့တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ တိုက်ဆောက်နေတာကို့ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာလာတင်နေ့တဲ့သားလူမမယ်”
“yah yah ဆိုတာကိုဘဲထပ်ကာတလဲလဲအော်လို့ မီးကျိုးမောင်းပျက် အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ဟိုဘက်ကလူကို ကြူနေတဲ့လူ”
“စားပြီးနားမလည် လုပ်သွားတဲ့သူကိုရန်တွေ တွေ့နေတဲ့ အလန်းမလေး”
“အဝေးရောက်နေတဲ့မေမေကြီးကို မီးမီးလေးရော ဖေဖေကြီးကရောလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုလာပြောပြနေတဲ့
ဒါတွေကိုကြားရတော့ ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ဆိုတာလေးကို သွားသတိရမိပါတယ်။
လူနေမူ့ထူထပ်လေလေ လိုအပ်ချက်များလေလေ ပြဿနားများလေလေ
မနက်8နာရီလောက်မှာ မိုးကုတ်က ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။
လမ်းကလေးက ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် စိမ်းစိမ်းစိုစို
တောင်တွေက လမ်းကို စီးမိုးလို့ငုံ့ကြည့်နေပါတယ်။
လူကသာ လမ်းပေါ်မှာကားကိုစီးလို့လာနေပေမယ့် စိတ်တွေကတော့ မရောက်သေးတဲ့မန္တလေးမှာ။
ဟိုရောက်တာနဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ညာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်တွေးလို့စီစဉ်လို့ ပူပန်လို့ပေါ့။
လမ်းတစ်လျောက်လုံးမှာတော့ ပုလိုင်းလေးလွယ် ဓါးကလေးခါးထိုး
တောထဲဝင်မျှစ်ချိုးဘို့အတွက် အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှာက်ရင် ဆေးလိပ်ကလေးတဖွာဖွာ
တောထဲဝင်မျှစ်ချိုး မိူရှာ ၀ါးခုတ် သွားမယ့်သူအားလုံးကြည့်ရတာ
မရောက်သေးတဲ့နေရာအတွက် ကြိုတင်လို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့ကျနော်တို့နဲ့တော့ အပုံကြီးကွာပေါ့။
မျှော်လင့်တယ်ဆိုမှတော့ရမှ ရပါ့မလားဆိုတဲ့ကြောင့်ကြမူ့ကို အစိုင်အခဲတစ်ခုလိုဖြစ်တည်လိုလာပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့လို့ မြို့နေ ပညာတတ်လူတန်းစားမှာတော့ မရနိုင်သေးတဲ့မျှော်လင့်ချက်များအတွက်ပူပန်ကြောင့်ကြလို့နေချိန်မှာ
လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ မျှစ်အချိုးထွက်နေသူများကတော့ တစ်နေ့မျှစ်ငါးပိဿာလောက်ရရင်တော်ပြီလို့
တိုင်းပြည်တပြည်မှာ တစ်နေ့မျှစ်ငါးပိဿာရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့လူတွေများ များလာမယ်ဆိုရင်
အင်းးးးးးးးး ဘယ်လိုပြောရမလဲ လေးပေါက်ရေ … ။
မြို့ ပြနေပြည်သူတွေ နဲ့ … နယ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် အနည်းငယ်များ ကွာခြားနေမလားပဲနော် … ။ မြို့ ပြနေပြည်သူတွေကတော့ မျက်လုံး နှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ … မောဟိုက်နေတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုက ဆီးကြိုနေတာပဲ… တနေ့လုံး .. ဇယ်ဆတ်သလို အကွက်စေ့ လှုပ်ရှားနေရတယ် .. လိုအပ်ချက်တွေကလည်း များပြား ပြင်းပြတာကိုး … နယ်ခံလူတွေကတော့ … မနက်မိုးလင်းလျှင် … အေးဆေးမနက်စာ စားမယ် … ပြီးမှ လုပ်စရာရှိတာလေ … flowလေးနဲ့ .. အငြိမ် လုပ်မယ် ….. လောဘသိပ်မရှိဘူး ၊ စိတ်ဖိစီးမှူ သိပ်မရှိ .. ပြင်းပြင်း ပျပျ လိုအပ်ချက် သိပ်မရှိဘူးလို့ ထင်ရတယ် … ။ သမီးရောက်ဖူးတဲ့ … မအူပင် မြို့လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောကြည့်တာ .. ။ စိတ်တွေ အရမ်းရှုပ်တဲ့ အခါ .. အရင်က သွားလည်ဖြစ်တယ် … ။ ညနေခင်းတိုင်း အလုပ်ကလည်း ပျက်လို့ မရတော့ .. အခုတော့လည်း …. ညအိပ်ခရီးထွက်လို့မရတော့ဘူးလေ …
အင်တာနက် ဆိုင်တွေ ထဲ မှာ
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မိတယ် ။
ရောင့်ရဲခြင်း ကို လေးပေါက် က
အတွေးလက်ဆောင်ပေးတာလို့ မြင်မိပါတယ် ။
ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး ။
ရောင့်ရဲတယ် ဆိုလို့ 
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗမာလူမျိုးများ ဟာ
နဂိုဗီဇ ကို က ရောင့်ရဲတတ်ကြတယ် ဆိုတာ
ဒီနေရာမှာတော့ သဂျီးကို ထောက်ခံရမယ်။ မိုးကုတ်နဲ့စာရင် မန္တလေး၊ မန္တလေးနဲ့စာရင် ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်နဲ့စာရင် သဂျီးတို့လိုနိုင်ငံရပ်ခြားက လူတွေ လူတွေ။ အပျင်းနိုင်ငံကသွားတဲ့လူတွေအဖို့တော့ လမ်းလျှောက်နေတာလား၊ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်နေလား မေးရအောင် လှုပ်ရှားသွားလာနေရတာတွေ။ ဒီကလူတွေ သွားလာလှုပ်ရှားနေတာနဲ့ကတော့ ကွာခြားသလားတော့ မမေးနဲ့။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပြောရဦးမယ်။ ဘာတွေလုပ်နေလဲ???
အနော်ငယ်ငယ်က နေခဲ့ တဲ့ အနော့်မြို့လေးကို လည်း တခါတခါ လွမ်းမိပါတယ် လေးပေါက်ရယ် ဒါပေမဲ့ အခု အနော့်မြို့လေးလည်းပြောင်းလဲပြီး ဆူညံ့နေပါပြီ မမှတ်မိတော့လောက်အောင်ပါပဲ……..
.တနှစ်တခေါက်တောင်ရောက်ဖို့မလွယ်တော့သလို ရောက်တဲ့အ ခါတိုင်းလည်း အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တချို့ကို လွမ်းမိတယ်…..
ငယ်ငယ်က နေခဲ့ရတဲ့ ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာ အုတ်ဖိနပ်ခံထားတဲ့ ရှည်တံရှည် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးရယ် အေးပြီးကြည်ပြီးနက်လှတဲ့ ရေတွင်းကြီးရယ်၊ အိမ်အောက်ထပ်က ကြိုးပုခက်ကြီးရယ်…
………ဆိုးလွန်းလို့ဘဘလိုက်ရိုက်လို့ပြေးပြေးပုန်းရတဲ့ ခြံထဲက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နေရာလေး ……ငယ်ငယ်က ဆိုက်ကားစီးပြီးသွားရတဲ့ မူကြိုကျောင်းလေး ( အိမ်နားက မူကြိုတူတူတက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျောင်းနေဘက် ခပ်ချောချောကောင်လေးရယ် ဟီး…)၊ ဈေးတန်းကျောင်းဟောင်းလေးရယ်၊
မရမ်းသီးပင်ကြီးတွေရယ်၊(တနှစ်တခါ မရမ်းသီးကို ပုတ်ပြတ်ရောင်းစားလို့ရတဲ့အထိ အပင်ကြီးတွေအများကြီး)၊ ……
သရက်ပင်တွေရယ် ၊ ကွမ်းသီးပင်၊ ကြောင်လျှာသီးပင်၊ ဆူးပုပ်ပင်၊ အိမ်ရှေ့က ခရေပင်ကြီးရယ်၊ ဆောင်းတွင်းဆို အစောကြီးထပြီး ခြံထဲမှာ မီးလှုံ့ရင်းထန်းမြစ်ဖုတ်တွေ စားခဲ့ရတဲ့ အချိန် ၊ ဒူးရင်းသီး မင်းဂွတ်သီးတွေ လှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ ရာသီရယ် ၊ အနော်တို့ တောင်ငူမြို့မှာပဲ ရတဲ့ ဟင်းခပေါင်းသီးရယ်( တောထဲကို ဆင်ဦးစီးတွေ သွားတဲ့အချိန်ပါလာတတ်တဲ့ ရှားရှားပါးပါး ကြက်ဟင်းခါးသီးတမျိုးပါ ဒါပေမဲ့ မခါးပါဘူး စားလို့ကောင်းရုံ ချိုချိုသက်သက်လေးပါ)၊ နောက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တောင်ငူက ကော်ဖီမှုန့်အစစ်၊ နောက်တောင်ငူ တို့ဖူးသုတ်၊ ပဲသီးစိမ်းနန်းကျင်းနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးသုတ်၊ ဖိုးဆန်းပဲလှော်၊ ဘဘ၀ယ်ကျွေးတတ်တဲ့ ပဲမုန့်လေး၊ အုန်းမွှေးလုံး၊ ညညဆိုက်ကားစီးပြီးသွားစားရတဲ့ ကုလားဆိုင်က နွားနို့နဲ့ နို့နဲ့ လုပ်တဲ့ မလိုင်မုန့်စုံ၊ ပြောရရင်လွမ်းလို့တောင်မဆုံးပါဘူး၊ အခုတော့လည်း အရင်နဲ့က ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တဲ့ မြို့တမြို့လို ခံစားရတယ်
၊ မှတ်မှတ်ရရ ၈ လေးလုံးအရေးအခင်းစတဲ့နေ့မှာ တောင်ငူကနေ မန်းလေးကို သွားတဲ့ ရထားကြီးပေါ်မှာ လမ်းကနေ ခဲတွေနဲ့ထုခံရတာကိုမှတ်မိနေသေးတယ် အရမ်းငယ်သေးပေမဲ့ အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ကြောက်နေခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မို့ စိတ်ထဲစွဲမိနေတယ်၊ အခုပြန်စဉ်းစားရင်လည်းအခုထိ ၀မ်းနည်းနေတုန်းပဲ ။ ဘာအပြစ်မှမရှိပဲ လူတွေအများကြီးက ရထားကြီးကို ဘာကြောင့်ခဲတွေနဲ့ ၀ိုင်းထုနေသလဲဆိုတာ အခုထိမတွေးတတ်အောင်ပဲ၊ (အဲဒီလိုခဲနဲ့ထုရင်သူတို့လိုချင်တာ ရမယ်လို့များထင်နေသလားမသိဘူး ) အဲဒီကစတဲ့ စိတ်ကြောင့်လားမသိ အကြမ်းဖက်တဲ့ အကြောင်းကြားရင် တုန်နေအောင်ကြောက်တယ် ၊ ဘယ်တော့မှအပြင်မထွက်ဖူး။ အကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုရင်လည်း အရမ်းမုန်းတယ်၊
အခုတော့ မန်းလေးမှာ အခြေကျလို့ မန်းသူ တယောက်အဖြစ်ကျင်လည်နေရတယ် ဒါပေမဲ့ ငယ်ငယ်ကဘ၀လေးကို တော့ တွေးတိုင်းလွမ်းလို့မ၀တသသပါ၊ မြို့ပြရဲ့ဘ၀ကတော့ မွန်းကျပ်လွန်းလှပါတယ် ၊ ငယ်ငယ်ကလို အရောင်တွေမဲ့တဲ့ ဖြူစင်တဲ့ဘ၀လေးကိုတော့ ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး၊ ခြံကြီးကို ရောင်းလိုက်တုန်းကကျခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဆိုတာ ………..
လေးပေါက်ရေ အင်တာနက်ဆိုင်က မြင်ကွင်းကို ပြောပြလို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေးပေါက်ရယ် ကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေက ခွဲလာတဲ့ လူတွေကို ကြာတော့ မေ့လာပါတယ်။ ကိုယ့်နေရာမှာ အစားထိုး ၀င်လာခြင်းခံရပြီး သူတို့ဟာ သူတို့ အသားကျလာပြီး ကိုယ်က အပြင်လူ ဖြစ်လာသလိုပဲ။ အချိန်အကြာကြီး အခွဲခံရလို့ ကိုယ်က မမေ့ပေမဲ့ သူတို့ကတော့ အသစ်အသစ်တွေနဲ့ ဖြစ်လာလို့ ကိုယ့်နေရာ မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကလို စကားတောင် လာမပြောချင်ကျတော့ဘူး။ သူ့လွှဲချ ငါ့လွှဲချ ဖြစ်နေကြပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိုအပ်ချက်တွေနောက် လိုက်လို့ ဖြစ်တာလား ဘာလားတောင် မစဉ်းစားချင်တော့ပါဘူး။ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ ကိုယ်က ဒီဘ၀ကို ရွေးမိတာကိုး။ တခုလိုချင်လို့ တခုပေးရတယ်လို့ပဲ စိတ်ဖြေနေမိတယ်။
ကျနော်တို့ဆီက လူတော်တော်များများက အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား မလုပ်တာကို
ရောင့်ရဲတယ်ဆိုတာက မိမိရလာတဲ့ ရလာဒ်ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံတာကတော့ရောင့်ရဲတာ။
တတ်နိုင်သလောက် အစွမ်းရှိသလောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာက ကြုိးစားတာ။
”ရောင့်ရဲတယ်ဆိုတာက မိမိရလာတဲ့ ရလာဒ်ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံတာကတော့ရောင့်ရဲတာ။”
ရေးနေရင်မှားမှာဆိုးလို့ အပေါ်ကပဲကူးချလိုက်တယ်….ဒီကြားထဲ ရှိသေးတယ် သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါမှာကျနေတာပဲ…ဘုန်းကြီးစားသွား လိမ့်မယ်တို့…. ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ဆင်ခြေ .. နောက်တခုရှိသေးတယ် …တော်ပါပြီး လောဘ မကြီးတော့ပါဘူးတို့….. လောဘ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကိုကောင်းကောင်းမသိတော့ ဆင်းရဲတွင်းထဲ နစ်သထက်နစ်နေကြတယ်…. ကျွန်တော်လဲ မချမ်းသာပါဘူး ကြိုးစားနေပါတယ်….
မြို့ပြရဲ့ မနက်ခင်းက ရင်မောစရာကောင်းသလို နယ်မြို့လေးရဲ့
မနက်ခင်းကလည်း ပျင်းစရာကောင်းနေပြန်ပါရောလား ဦးပေါက်ရယ်။